Software Development | HL株式会社
Software Development အင်ဂျင်နီယာ
ကျွန်ုပ်တုိ့ ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အဓိကလုပ်ငန်းမှာ ကွန်ပြူတာ software နှင့်ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကြီးမားသော အသုံးပြုသူ customers များရှိခဲ့ပြီး ကျယ်ပြန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဆက်အသွယ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် လူတော်များကို သင့်တော်သောနေရာများတွင် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ကာ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းနှင့်တကွ ထိုလူတော်များကိုပါ အတူတိုးတက်စေချင်ပါသည်။
လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတွင် Software Development နှင့်ပတ်သက်၍ ထူးချွန်သူလိုအပ်နေသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်သော လူတော်များကို အလုပ်ခေါ်လိုပါသည်။ လိုအပ်သော အရည်အချင်းများရှိပြီး အင်တာဗျူးအောင်မြင်ပါက ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ရန် အလုပ်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အရည်အချင်းများ
၁. Diploma/Certificate (အလုပ်သက်တမ်း ၃ နှစ်အထက်) ရှိရမည်။ ဂျပန်စကား အခြေခံ နှင့် N2 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ တရုတ်စကားတတ်သူ ဦးစားပေးမည်။
၂. ဂျပန် Software Development အတွေ့အကြုံ တစ်နှစ်နှင့်အထက်
Oracle/DB/PLSQL/MYSQL Server/Mysql Postgre SQL ကိုကျွမ်းကျင်ရမည်။
ဤလုပ်ငန်းသည် ဂျပန်န်ိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရေရှည်နေထိုင်နိုင်သူကို ဦးစားပေးပါမည်။
၁. လစာ ၂ သိန်းမှ ၃ သိန်း၈သောင်း (ဂျပန်ယန်း) (ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနှင့် အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်သည်။)
၃. ကုမ္ပဏီမှ ပြုလုပ်/စေလွှတ်သော သင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်
၅. Year Bonus နှင့် လူမှုဖူလုံရေး
၆. ဝန်ထမ်းများနှင့် အပျော်ခရီးထွက်ခြင်း
အပတ်စဉ် စနေ၊တနင်္ဂနွေ နှင့် ဂျပန်အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။
Company Website: http://hl-soft.org
E-mail Address: lu@hl-soft.co.jp
အလုပ်လျှောက်လိုသူများသည် အထက်ပါ E-mail သို့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်(CV)နှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လြှောကျလှာ၏လမျးဝကျဘျ, သညျ “ Apply” ခလုတျကိုကလဈနှိပျပါကြေးဇူးပွုပွီး
သငသြညြ mail ဖွငျ့လြှောကျထားရနျလိုလြှငျ
လြှောကျထားသူမြားမေးလျအားဖွငျ့ (Utsushiha) ပွနျလညျစတငျ,” သဘောတူညီခကြွပုံစံ” ခလုတျကိုကလဈနှိပျပါ,သဘောတူညီခကြွပုံစံ【個人情報の取扱いについての同意書（応募者用）】download, အနိမိတျကိုယျရေးမှတျတမျး mailing ခိုငျခံ့ပါ။ (ထိုသဘောတူညီခကျြ၏ဖွဈရပျလကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျမဟုတျခုနှဈတှငျကကိုယျရေးရာဇဝငျကိုလကျခံရရှိရနျငွငျးပယျမညျ)